SJSZ65 PVC valin-drihana tontonana extrusion milina - China Qingdao Suke milina
PVC Ceiling Panel Extrusion Machine -Suke milina
ny orinasa dia miara-miasa amin'ny oniversite maro mba hampivelatra ny ilaina maika plastika milina. Koa mifoka nandroso ny teknolojia avy any ivelany mba hahatratra ny tanjon'ny manome feno milina sy ny teknolojia.
Ny valin-drihana no PVC atao amin'ny PVC ary ny sasany additives. Izany no ampiasaina indrindra ao an-dakozia sy ny washroom fandravahana. Manana ny toetra mampiavaka ny mazava lanjan'ny, hamandoana-porofo, hafanana insulation ary tsy mora ny afo, mitelina vovoka, fa mora hanoratanao, hametraka.
1. Manome Sakafo Sokiro Machine
2. SJSZ 51 × 105 Twin Sokiro Extruder
3. Extrusion bobongolo
4. famolavolana Machine
5. ny fipetrany-eny Machine
Mpanampy Machine for Option
Misy fitiliana ho an'ny im-betsaka, noho izany dia manana ny tombony ny famonjena sy ny hery ara-nofo, ary tsy mitsaha-mitombo fahombiazana sy ny tombony amin'ny alalan'ny nanangana mandroso ny teknolojia. Ny vokatry ny valin-drihana PVC milina dia malefaka, tsara tarehy, ary tsy misy ratsy fofona, afa-tsy mora ny ho avy endrika.
Maro ny lamina ny PVC valin-drihana, toy ny assortments ny milky fotsy, loko fanosotra, asidra manga sy ny fomba ny voninkazo, parquet, bararata sy ny paiso. Ary mazava ho azy, ny lamina sy ny loko ny PVC valin-drihana dia atao araka ny mpanjifa 'fepetra.
PVC valin-drihana, PVC tontonana, PVC rindrina tontonana
Light amin'ny lanja sy ny fametrahana mora
5.8m / 5.95m / toy ny mpanjifa 'fepetra
Fanontam-pirinty, mafana-nohitsakitsahiko, pearlite fanontam-pirinty, peritoneal, ara-dalàna malamalama, avo malamalama
Loko isan-karazany ho fidinao
(1) Avo ambonin'ny hitakemotra, malama tsy misy elanelana, rehefa concatenated
(2) Fireproof, hamandoana-porofo, bobongolo-porofo, tantera-drano, soundproof, feo-mitroka, hazavana amin'ny lanja sy ny fametrahana mora
(3) Ny valin-drihana sy ny rindrina fandravahana
(4) ny loko isan-karazany sy ny lamina
Fisaka surface na afovoany Groove
Previous: SJSZ51 PVC valin-drihana tontonana extrusion milina
Manaraka: SJSZ80 PVC valin-drihana tontonana extrusion milina
PVC Fefy Profile Extrusion Machine
PVC marbra Profile Extruder
PVC vita tamin'ny marbra Profile Extrusion-dalana,
PVC vita tamin'ny marbra Profile Machine
PEPP Wood-plastika Profile Production-dalana,
SJSZ48 PVC valin-drihana tontonana extrusion milina
SJSZ65 PVC ravaka rindrina board extrusion milina
SJSZ80 PVC ravaka rindrina board extrusion milina